१.६३ % ले बढ्यो नेप्से परिसूचक, २ अर्ब ९९ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
असोज १९, काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १ दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् ४१ दशमलव ८४ अंकले वृद्धि भएको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक बढेर २ हजार ६१२ दशमलव ६५ विन्दुमा पुगेको हो । यस अवधिमा कारोबारमा आएका २२३ ओटा धितोपत्रको ५८ लाख ४२ हजार १३५ कित्ता शेयरको ४१ हजार ५१ पटकमा रू. २ अर्ब ९९ करोड ६८ लाख १९ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कुल कारोबारमा आएका धितोपत्र मध्ये तीन ओटा धितोपत्रको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यो दिन मल्टीपर्पस फाइनान्स,हिमालयन पावर पार्टनर र समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य अघिल्लो कराोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ ।
त्यसैगरी एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्यमा भने नकारात्मक सर्किट लागेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशत घटेसँगै नकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार १४२दशमलव १० मा झरेको हो । कम्पनीले शेयरधनीलाई नगद लाभांश मात्र वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै शेयरमूल्य घटेको हो । कम्पनीले गत आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई ५ दशमलव ४१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यो दिन सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक शेयरको रू. १३ करोड ६६ लाख ५० हजार बराबरको भएको छ । दोस्रोमा मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रू. ११ करोड ८६ लाख ११ हजार बराबरको भएको छ ।
कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहको परिसूचकमध्ये व्यापार समूहको परिसूचक १ दशमलव ८४ प्रतिशतले घटेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक बढेको छ । सबैभन्दा बढी वित्त समूहको परिसूचक ४ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यसैगरी बैंकिङ समूहको परिसुचक १ दशमलव शून्य २ प्रतिशत,होटल एण्ड टुरिजम समूहको १ दशमलव २२ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको परिसूचक ३ दशमलव १२ प्रतिशत,हाइड्रोपावर समूहको २ दशमलव २९ प्रतिशत,निर्जीवन बीमा समूहको २ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसैगरी उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको १ दशमलव ७५ प्रतिशत,अन्य समूहको शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत,लघुवित्त समूहको २ दशमलव ७५ प्रतिशत,जीवन बीमा समूहको २ दशमलव १५ प्रतिशत,म्युचुअल फण्ड समूहको शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक १ दशमलव शूनय ७ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ ।
यो दिन बजार बढेपनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेन । छोटो समयमा बजार धेरै अंकले घटेको र बीचका दिनमा बढेको बजार अर्को दिनदेखि फेरि घट्ने प्रवृतिका कारण पनि लगानीकर्ताले ढुक्कका साथ लगानी गर्न सकेका छैनन् । सोही कारणले गर्दा पनि कारोबार रकम बढ्न सकेको देखिदैन ।